Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Harry Kane Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Eziokwu
Anyị Harry Kane Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata, akụkọ mbido, ndị nne na nna, ezinaụlọ, nwunye (Katie Goodland), ụmụaka (Ivy Jane na Vivienne Jane), Ndụ Onwe Onye, Ndụ na Net Worth.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ ndụ zuru oke nke ezigbo onye na-eme egwuregwu, onye na-agba ọsọ nke merela aha ma ụlọ ọgbakọ na obodo.
Ụdị Lifebogger nke Harry Kane Akụkọ na-amalite site n'oge ọ bụ nwata mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama na egwuregwu mara mma.
Iji mee ka akụkọ ndụ gị nwee agụụ maka itinye aka na ọdịdị Harry Kane's Biography, lee ndụ nwata ya na ihe ngosi ịrị elu. Ị ga-ekweta na m na ihe osise a na-achịkọta akụkọ ndụ ya.
Harry Kane's Biography - Lee Ndụ Nwata Ya na Ọganiihu Akụkọ.
Kedu ka Harry Kane siri dị mma, ngwa ngwa? Onye ọ bụla maara na ọ bụ onye ọkpụkpọ nwere ntụkwasị obi na-enweghị atụ na ikike nke ya.
Akụkọ nwata Karl Toko Ekambi gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Na-esote oge mwute Spurs 2020/2021, ọtụtụ ndị egwu echewo echiche… Oge eruola ka Harry Kane hapụ Spurs? Ọfọn, naanị oge ga-agwa.
N'agbanyeghị na accolades accrued (dị ka Wayne Rooney mere) kemgbe ọtụtụ afọ, anyị na-aghọta otu ihe.
Na ọ bụ naanị ndị egwuregwu bọọlụ ole na ole gbariela akụkọ ndụ Harry Kane zuru oke. N'ihi nke a, anyị zara oku claion ahụ iji kọọrọ gị akụkọ ya. Na-enweghị oge ọzọ, ka anyị malite.
Harry Kane Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Harry Edward Kane na 28th nke Julaị 1993 na Chingford dịpụrụ adịpụ na Northeast London - nke dị naanị kilomita ise site na ámá egwuregwu Spurs, White Hart Lane. A mụrụ ya na nne na nna aha ya bụ Kim (Nne) na Patrick Kane (Nna).
O tolitere na Chingford n'akụkụ nwanne ya nwoke bụ Charlie ma ha abụọ gara inglọ Akwụkwọ Foundation nke Chingford.
A zụlitere Harry Kane n'ụzọ ndụ Irish. Ndị nne na nna ahụ si Galway, bụ obodo ọdụ ụgbọ mmiri nke dị na ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ Ireland. Ha kwagara London ka umuaka ha.
Striker tolitere na-amụ omenaala, ọdịnala, asụsụ, egwu, nka na akwụkwọ nke ndị London. Ngwá egwuregwu football ya bụ ihe okike ma jikọta ya na ezinụlọ nne ya. N'ajụjụ ọnụ na nso nso a, Harry Said;
"Echere m na mkpụrụ ndụ ihe nketa egwuregwu m sitere n'akụkụ mama m nke ezinụlọ n'agbanyeghị na isiokwu a bụ arụmụka na-ekpo ọkụ n'ezinụlọ Kane.
Ọ ga-abụ na papa m agaghị amasị m ka m kwuo otú ahụ, ma echere m na nna nna m bụ́ Eric nọ n'akụkụ mama m bụ ezigbo onye egwuregwu bọọlụ ma na-egwuri egwu n'ọkwa dị mma. "
Oge ncheta oge Harry Kane bụ nwata nwere oge mara mma ya na nwanne ya nwoke bụ Charles.
Dị ka mama Harry si kwuo Kate, "Ma Charles na Harry dị ka ụmụnne si n'otu mkpụrụ obi kewara abụọ wee jiri ụkwụ anọ na-agagharị." Harry hụrụ Charles ọ bụghị naanị dị ka nnukwu nwanne ya kama dị ka dike.
Charles Kane (Aka ekpe) na Harry Kane (Aka nri).
Ọnye na-bụ Katie Goodland? - Harry Kane Nwunye:
Harry Kane enwewo mmekọrịta dị ogologo oge na nwata obi ya bụ Katie Goodland onye ọ hụrụ n'anya n'oge ndụ ya niile.
Di na nwunye a yiri ka ha nwere obi uto ọnụ na Katie na-etinyekarị foto na vidiyo na akaụntụ Instagram ya na Harry, ma ọ bụ na ndụ ụlọ ha ma ọ bụ ezumike - na ọ na-ezigara ụfọdụ egwuregwu Spurs.
Kane kwadoro mmekọrịta ahụ n'ihu ọha na February nke 2015, na-agwa Esquire magazine
"Anyị gara ụlọ akwụkwọ, n'ihi ya, ọ hụrụ ọrụ m dum. N'ezie, ọ na-achọta na ọ bụ ntakịrị nzuzu. Echere m na ọ nọ na akwụkwọ ahụ ugboro abụọ na-ewepụ ndị nkịta ".
Ugbu a, ọ bụghị ozi ọma na ma nnụnụ ịhụnanya hụrụ n'anya na-enweta mgbasa ozi anya site nkịta ije na London ọhịa.
Na foto dị n'okpuru ebe a, ma Kane na Kate yi uwe mkpuchi egwuregwu kachasị amasị ha ka ha na-elekọta otu nkịta ọ bụla.
Dika ozo, ha abua nwere nwa nwanyi aha ya bu Ivy onye amuru na Jenụwarị 8, 2017. Ivy nwetara nlebara anya nke oma banyere uzo ozo nke nna ya site na White Hart Lane nke kwesiri imeghari.
Foto dị n'okpuru ebe a na-egosi na onye ahụ na-egbu ya hụrụ ịhụnanya na ntakịrị mpako na ọṅụ ya - na-eji obere obere spurs na ọkpọ dị mma n'isi ya - ka ọ na-atụgharị ya na blanket blanket, ebe Kate ji mpako na-ele ya.
Harry Kane na ada, Ivy.
Harry Kane kwenyere na ezinụlọ ya bụ ihe kacha mkpa n'ụwa. Ndị atọ ahụ na-etolite okirikiri ike ịhụnanya. Ọ bụ ezigbo nwoke ezinụlọ.
Harry Kane na Ezinụlọ Na-ekwu Goodbye na White Hart Lane.
Harry Kane Untold Biography Eziokwu - Nwanne Ya Nwoke Na-emehie Ya Ọtụtụ:
Ọ bụ nwanne nwoke okenye nwoke aha ya bụ Charlie. Charlie dị ka obere nwanne ya nwoke, Harry. Ọ nọ n'aka ekpe na foto dị n'okpuru. Ọ na-emehiere ya ọtụtụ mgbe.
Strapagidesi ike n'etiti Charley na Harry Kane.
Maka ụfọdụ ndị na-akwado ya, ọ nwere ike bụrụ ihe na-akpasu Charlie iwe maka Harry ma a bịa n'ịbanye na autographs.
Mana Charlie hụrụ ya n'anya - na ọ bịanyela aka na autographs dị ka nwanne ya nwoke mgbe ndị egwu na-agha ụgha na-ekwenye na ọ bụ Harry.
N'ezie, Charlie na-ekpokọta uru zuru ezu nke ịbụ nnukwu nwanna nwoke na-agba bọlbụ.
Ihe mere Charlie ji enwe obi ụtọ ịbụ Harry.
Ọ na-enweta ihe ọṅụṅụ n'efu, nwee ike ịga emume onyinye ma soro Harry na-egwu gọlfụ nke ukwuu, Matt Doherty na ndị ọzọ.
Harry Kane Arsenal Akụkọ - Ọ malitere na ndị Gunners:
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị na-akwado Arsenal na ndị Spurs, mana nkezi onye nwere ike ọ gaghị ama na Harry Kane malitere n'ezie na ọrụ ọkachamara ya na ndị asọmpi obodo Tottenham Hotspur, Arsenal.
onye ama ama "Harry Kane, ọ bụ otu n'ime anyị" chants nwere ike ịdị ugbu a - Kane bụ Spurs site na ụbọchị ndị a - mana ọ bụ onye na-akwado ya na onye ọkpụkpọ egwu maka ndị Gunners n'oge ahụ.
Mgbe a hụrụ ya ka ọ na-egwuri egwu maka ụlọ ịgba egwu Ridgeway Rovers nke mpaghara ya, ọ sonyeere ụlọ akwụkwọ ntorobịa Arsenal mgbe ọ dị afọ asatọ na 2001, mana a tọhapụrụ ya mgbe nanị otu oge gasịrị n'ihi na ha chere na ọ dịghị mma.
Ọ laghachiri na-egwu maka Ridgeways Rovers ruo afọ abụọ, tupu ya abanye na mahadum Watford ruo oge ụfọdụ, wee mechaa na Spurs. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Harry Kane Untold Bio - Ọ gaara egwuri egwu maka otu egwuregwu bọọlụ ndị Irish:
N'oge ederede, a na-ahụ Kane ugbu a dị ka otu n'ime aha mbụ na ndepụta squad England - na n'ezie ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite maka ndị otu England.
Ọdịda mbụ ya imere onwe ya aha na ọkwa dị elu hụrụ ka ọ na-echebara echiche nke ukwuu maka igwu egwu Republic of Ireland kama.
Kane ruru eru igwu egwu Irish site na nna ya, onye amụrụ na Galway, mana na August 2014, ọ chịrị ịgbanye ntụkwasị obi, na-ekwu na ọ chọrọ ịbanye na ndị otu egwuregwu England.
Tupu nke ahụ, onye bụbu onye isi Ireland Martin O'Neill kwuru na Kane gosipụtara ezigbo mmasị na ịnwe oku na-akpọ ndị otu ya ma na-anọchite anya ndị otu ya.
Agbachitere agbachitere na onye nwe Kane:
Ọ nweghị ihe dị mma maka klọb bọọlụ na ndị na-akwado ya karịa dike toro n'ụlọ.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ e kwuru n'elu na Harry Kane nọrọ obere oge dị ka nwatakịrị na-anọchite anya ndị na-asọmpi Arsenal, ndị egwuregwu anaghị abịa n'ụlọ Tottenham Hotspur Football Club karịa onye nwere nkà.
Harry Kane: Amụrụ 5 Miles si White Hart Lane.
Eziokwu a na - akọwa ihe kpatara Spurs fan ji bụrụ -"Harry Kane, ọ bụ otu n'ime anyị" abu.
A na-anụ abụ a na egwuregwu Spurs ọ bụla, ọ bụkwa eziokwu dị ka a mụrụ ya na mpaghara ahụ, sitere na ezinụlọ nke ndị Fans Tottenham wee bịarute Spurs mgbe ọ dị nanị afọ 11.
Kane mere ụzọ ya site n'ọkwá wee si na onye na-akwado ya na-aga n'ihu na onye na-amalite ịmalite maka otu nwata ya.
Nke a na-eme ka ọ bụrụ ọkacha mmasị siri ike na Lilywhites, onye na-egbu ya na-ekwu na ọ dịghị mgbe ọ chọrọ ịpụ.
Harry Kane Goofu Hobby:
E wezụga eziokwu doro anya na Harry Kane bụ nnukwu ndị na-agba ọsọ na onye hụrụ egwuregwu ahụ n'anya, ọ na-enwekwa mmasị na ọtụtụ egwuregwu ndị ọzọ - ihe doro anya ịhụ ma ị na-eso ya na akaụntụ Twitter ya.
Ọ na-aza ajụjụ mgbe niile na egwuregwu cricket a na-egosi na televishọn ma na-etinyekarị foto nke ịgba gọlfụ ya.
Harry Kane Egwuregwu Golf.
Ọzọkwa, ọ na-ebipụta tweet na foto onwe ya mgbe ụfọdụ mgbe ọ na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ịnyịnya, na o doro anya na ọ na-elegide anya na MMA.
Nyere na ọ na-eji ọchị na-enye aka ịlụ ọgụ UFC kpakpando Conor McGregor na Twitter! Ị chere na Harry "Ajọ Ifufe" Kane nwere ike mebie ya na octagon?!
Ihe nkiri Harry Kane - E boro ya ebubo!
Enweela asịrị na onye egwu England mere ihe n'otu ihe nkiri.
E boro Harry Kane na ọ rụrụ ọrụ ndu nke Cole Sear n'akụkụ Bruce Willis na 1999 thriller. Ụdị nke isii n'okpuru akwụkwọ ozi ha bụ Haley Joel Osment.
Mgbe anyị mechara nyocha, anyị chọpụtara na ọ bụghị ya - kama ọ bụ nwata nwoke nke yiri ya.
Azụmahịa Harry Kane:
Kane na-eme mmemme mmụta nkuzi ịgba bọọlụ maka ndị na-enweghị ọrụ na-achọ ịbụ ndị ọka ikpe. Ọtụtụ klọb na-akpọ ma jiri ọrụ ịgbagharị ha ruo taa.
Harry Kane Untold Biography Eziokwu - Grammarian:
Kane mere onye na-eto eto Spurs onye na-akwado ya dezie akara ya site n'ịgbanwe 'nke gị' ka ọ bụrụ 'ị nọ' n'ihi na ọ na-eche banyere ndị na-akwado ya ma ghọta na ọ dị mkpa ụtọ ụtọ ụtọ.
A tụrụ Kane n'ụlọ mkpọrọ maka idina mmadụ n'ike:
Ndị iwu iwu ga-abụ na ndị na-alụ dina dina onye ọbịbịa n'ime ogige ntụrụndụ nanị awa ole na ole tupu ọ lụọ nwa nwanne Harry Kane dị ime.
Derry McCann, 28, doro nwanyị ahụ dị afọ 24 ọgụ 'nagidere na usoro' ihe karịrị awa abụọ na Victoria Park na Hackney, ọwụwa anyanwụ. London.
Ndị ọrụ nyocha kwenyere na ọ zubere idina nwanyị dị iche, mana 'efunari ụzọ' ya wee jide onye ahụ mechara ka ọ na-ala n'ụlọ ka ya na ndị enyi ya kpasịrị n'abalị n'isi ụtụtụ Jenụwarị 13.
Ka o mechara dina ya n'ike ugboro ugboro, o zurukwa ekwentị ya na bra, ọ gwara onye ahụ...Nwere obi ụtọ na emeghị m vidiyo ya '.
Awa ole na ole ka nke ahụ gasịrị, McCann lụrụ na Vestry na Bromley-by-Bow ma debe foto ya na nwunye ọhụrụ ya Kerry Hogg, 27, na ọha. Facebook page.
Kerry, onye na-amaghị banyere mwakpo ahụ ma mụọ nwa McCann n'oge na-adịbeghị anya, bụ nwa nwanne England na Spurs Harry Kane.
Nna ya na nne ya bụ ụmụnne. A mara di ya ikpe ndụ na opekempe afọ itoolu.
Harry Kane David Beckham Akụkọ nke:
Ihe osise dị n'okpuru ebe a na-egosi obere Harry na-ezute England Legend n'oge nleta pụrụ iche na David Beckham Academy na 2005.
Taa, Kane etolitela ma na-akụ ihe mgbaru ọsọ maka ụlọ ọgbakọ ya na obodo ya.
Harry Kane malitere ịgbaso nzọụkwụ nke David Beckham, ka onye nkuzi Pee ahụ kụziiri Spurs kpakpando n'ụlọ akwụkwọ ahụ ndị egwuregwu abụọ gara.
Harry Kane Zute Beckham mgbe ọ dị afọ 10.
Egwuregwu mgbakọ Tottenham Kane gara Ụlọ Akwụkwọ Nlekọta Chingford, otu ụlọ akwụkwọ ahụ Beckham gara dịka nwatakịrị nọ n'ebe ugwu London.
Eziokwu Akụkọ ndụ Harry Kane - NdụBogger ọkwa:
Anyị na-enye LifeBogger Biography Nkọwa nke Harry Kane.
Akụkọ nwata Dwight McNeil gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ na-enweghị atụ
Matt Doherty Child Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Akụkọ Na-adịghị Anya